घरमा अचानक कमिला देखिनु कस्तो संकेत ? तपाईको घरमा पनि छन् की ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १५, २०७८ समय: १३:०३:०६
गृह दोष दुर गर्नको लागि कमिलाई गुलियो रोटी खुवाउद शुभ हुन्छ । साथै लक्ष्मी पनि खुसी हुन्छिन् ।यसैगरी सपनामा कमिला देख्दा धन लाभ हुने बताईन्छ । तर अधिक मात्रामा कमिला देखे जीवनमा चिन्ता बढ्ने संकेत गरेको मानिन्छ ।घरमा आएको कमिलालाई मार्नु दुर्भाग्य हुने समेत ज्योतिषमा बताईएको छ